iFixit inowana yakawanda bhatiri uye zvirinani kuramba mvura kweApple Watch | IPhone nhau
iFixit inowana yakawanda bhatiri uye zvirinani kuramba kwemvura muApple Watch S2
Miguel Hernandez | | Apple Watch, Apple zvigadzirwa
IFixit inochida, uye isu tinoda kuti iwe chiifarire. Tiri kutaura nezvekuputsa michina ine logo yeapuro. Nezuro timu yeFixit yakadzika kuzoshanda neApple Watch Series 2, chazvino chipfeko chakapfeka kubva kukambani yeCupertino inogona kutengwa nhasi. Iyi nyonganiso yakaratidza dzimwe nhau kuti Apple yaisada kutaura muKeynote, sezvakaitika neiyo 3GB ye RAM mazuva mashoma apfuura. Ngatitarisei mukati meApple Watch Series 2 kubva kuIFixit timu yenyanzvi.
iFixit yatoburitsa kare pawebhusaiti yayo ongororo yekutanga mukati meApple Watch Series 2, iyo yakaratidza munzvimbo yekutanga isingatarisike 273 mAh bhatiri mune 38mm modhi, iyo inotora 33% mamwe bhatiri kupfuura emhando yapfuura (205 mAh). Zvisinei, kunyangwe paine kuwedzera kukuru kwebhatiri, kure nezvatingaone mukuchinja kubva kune imwe iPhone kuenda pane imwe, kuzvitonga hakuna kuvandudzwa, zvirinani sekureva kwaApple. Nekudaro, uku kuchengetedzwa kwekuzvitonga kunyangwe paine huwandu hwakawanda kunogona kunge kuri nekuda kweiyo yakabatanidzwa GPS iyo iyo Apple Watch Series 2 ine yayo chikwereti.
Sekutaura kweApple, kuramba kwemvura kwakagadziridzwa, nechinangwa chekuti vashandisi vanogona kuishandisa kuyera kurovedza kwavo mumvura. Kuramba kwemvura uku kunokutendera kuburukira ku50m kweinopfuura maminetsi makumi matatu. Zvichakadaro, iFixit haisati yawana iyo nyowani S2 chip uye GPS zvakadaro kuti utarise zvakanaka kwavariVari kushanda nesimba kubvarura Apple Watch Series 2 kuti tikwanise kunakidzwa nekukurumidza kugadzirisa kwavo dzidziso. Isu hatina kana kumboshamiswa nekuvandudzwa kwesimba rebhatiri tichitarisa kupenya kwakakwirira kwechidzitiro uye GPS.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » iFixit inowana yakawanda bhatiri uye zvirinani kuramba kwemvura muApple Watch S2
iFixit inodambura iyo iPhone 7 Plus uye inoratidza zvakavanzika zvayo
Yekutanga Apple Store muMexico ichavhurwa munaGunyana 24